Vedio;-Faah-faahin laga helayo Khasaaraha ka dhashay dab ka kacay | SMC
Home WARARKA MAANTA Vedio;-Faah-faahin laga helayo Khasaaraha ka dhashay dab ka kacay
Vedio;-Faah-faahin laga helayo Khasaaraha ka dhashay dab ka kacay
Barqonimadii maanta waxa uu dab ka kacay Kaalin shilaalka lagu iibiyo oo ku taalla kasoo horjeedka Isbtilaalka Hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Sida dad goobjoogayaal ah ay Warbahainta gudaha u sheegeen, dabka ayaa gaaray Farmashiye iyo Dukaan ku dhegen Kaalinta shidaalka ee la sheegay in dabka uu ka bilawday, waxaana burburay dhismaha labada xarumood.
“Dabka waxa uu burburiyay hanti badan, si uusan u gaarin goobaha ganacsi ee ka dhaw dhismaha gubtay waxaa kasoo gaaray Gaadiidka dab dhamiska oo ugu dambeyn baqtiijiyay” sidaasi waxaa yiri qof kamid ah dadka deegaanka.
Sarkaal katirsan kooxda dab damiska waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay ku wargeliyeen goobaha gubanaya in ay u dhaqaaqeen, muddo kooban kadibna ay ku guuleysteen in ay damiyaan.
“Maalin waliba waxaa gubanaya Goobo ganacsi, waa Nasiib darro in goobihii ay lahayd waaxda dab damiska ay degen yihiin shaqsiyaad, isla markaana aan waddooyinka loo baneen Gaadiidka Gurmadka, waxa aan soo jeedinayaa in jidadka loo baneeyo Gaadiidka Dab damiska“ Maxamed Shariif oo katirsan Shaqaalaha Gobolka Banaadir.
Previous articleTurkiga & Midowga Yurub oo ku dhow heshiis cusub
Next articleDhageyso Itoobiya oo hakisay saamigii ay ku lahayd Dekadda Berbera